Home Wararka Gudaha Daawo:- Musasalkii Fahad Yaasiin oo shaaciyey xogta ciidamada Soomaalida ee tababarka loogu...
Daawo:- Musasalkii Fahad Yaasiin oo shaaciyey xogta ciidamada Soomaalida ee tababarka loogu qaaday Eratariya
Agaasimihii hore ee hey’adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo su’aalo laga waydiiyey ciidamadii Soomaalida ahaa ee tababarka loogu qaaday dalka Eretriya ayaa sheegay inay ciidamadaas sax yihiin oo ay ku maqan yihiin dalkaas.
Fahad Yaasiin oo wax laga waydiiyey sababta ay u doorteen in ciidamada loo qaado dalka Eretariya iyadoo la heli karo dowlado kale ayaa yiri “ horta adiga markaad baahi qabtid cidda ku siineyso ayaa laga qaataa, anaga baahida aan qabnay waxay aheyd in ciidamo naloo tababaro, marka dowladihii kale ee ciidamada noo tababarayey ma aqaan waxay ay Eretariya uga duwan tahay,”.
Wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray “ Eretariya waxay kamid tahay dowladaha bixiya tababarada ugu wanaagsan, weliba ciidamada aan geynay waxay siisay tababarkii ugu wanaagsanaa”.
Mar waxa laga waydiiyey waxyaabaha ciidamadaan loo tababaray ayuu yiri “ waxaa loo tababaray qeybaha kala duwan ee ciidamada Militariga, waxaa lagu tababaray hub kala duwan, waxaa loo tababaray jir ahaan, waxay noqon doonaan hanta ay ummadda Soomaaliyeed sanado badan u aayi doonaan”
Fahad Yaasiin ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in ciidamadaas ay ka qeyb qaateen dagaaladii ka dhacay dalka Itoobiya ee u dhaxeeyey dowladda dhexe iyo Tegreega.
“ Waxaa ka xumahay inaan warkaas dhaho, waxaa arrintaas faafiyey Tegreega iyo kuwa u shaqeeyo ee Soomaaliya jooga, waxaa jiro siyaasiyiin Soomaali ah oo Tegreega u shaqeeya, ma ii sheegi kartaa waxa Itoobiya oo 100 Malyan ah uga baahan tahay ciidamada Soomaaliya, hal habeen ayey qortaa boqolaal kun oo askar ah, waa wax caqliga ka hor imaanayo in la dhaho Itoobiya ayaa u baahan tahay dhowr kun oo ciidamo Soomaali ah oo tababar loo sameenayey” ayuu yiri Fahad Yaasiin.
Wuxuu intaas kusii daray “ Waxaan xaqiijinayaa ma jiro hal askari oo ciidamada dowladda ee tababarka u joogo Eretariya oo ka qeybgalay dagaalka Itoobiya, xataa ma jiro hal askari oo ka baxay xirada tababarka oo aaday magaalooyinka kale ee Eretariya”.
Ugu dambeyntii Fahad Yaasiin ayaa sheegay inay la fadhiisteen waalidiinta ilmaha loo qaaday Eretariya, wuxuuna sheegay inay mar kasta la hadlaan ilmahooda.
Waalidiinta dhalay ilmaha loo qaaday Eretariya ayaa horey u sheegay inay ilmahooda ku la’yihiin nolol iyo geeri.
Qeybta 4aad: Maxay tahay Eedeynta xasaasiga ah ee Fahad Yasiin dusha ka saaray Agaasimaha cusub ee Sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad?
Previous articleDEGDEG Kooxo hubaysan ayaa Muqdisho ku dilay Nabaddoon Warsame oo kamid ahaa ergadii soo dooratay
Next articleLaba dhinac oo saameyn xoog leh ku leh magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub (wax badan ka ogoow)